Ngwakọta ihe eji emechi anya nwere ike imepe akụkụ nkuanya na akụkụ mmiri ịsa ahụ iche, ma ọ bụ mepee nku anya na ịsa ahụ n'otu oge. Akụkụ nkuanya na ịsa ahụ dị n'otu akụkụ.
The Bohua eyewash nzukọ bụ otu oge nkedo ịkpụzi na-eji ire ụtọ elu, ike mgbali na-eguzogide na ogologo ọrụ ndụ. Enweghị nsogbu ọ bụla n'oge oyi ma ọ bụ nrụgide mmiri dị elu. Adịghị mma mgbe niile na-aghọ welded akụkụ. Ọrụ ahụ dị nhịahụ ma bụrụ nke a na-agbanye ọkụ, nke ọ bụghị naanị na-emetụta ọdịdị kamakwa ọ na-ebelata ndụ ọrụ. N'ebe ndị oyi na-atụ ma ọ bụ mgbe nrụgide mmiri dị elu, ọ dị mfe ime ka mgbasa nke ọkpọkọ ahụ gbawaa.
Myọ: Akpa oyi akwa PP njupụta dị elu iji hichaa ihe ndị ka ukwuu na mmiri. Uzo nke abuo na-eji okpukpu ano di elu nke 304 igwe anaghị agba nchara megharia ihe ndi ozo iji mee ka ihe ndi ozo di nma, ebe ha na-achusa mmiri, na-eme ka mmiri di ka mmiri, ma jiri nwayọ wepu anya iji gbochie adịghị ọcha na mmiri siri ike site na nke abụọ emebi anya
Isi igwe ịsa ahụ nwere atụmatụ ọkara ọkara n'akụkụ ya, arc ahụ na-agbagọkwa akụkụ abụọ dị mma nke R250 na R39 n'otu n'otu, nke mere na mmiri ịsa ahụ na-agbasasị n'akụkụ aak na mgbidi nke ime ụlọ ịsa ahụ, kpọmkwem na elu nke 1524mm, na-eru mkpuchi nke 508mm na dayameta The nso, n'ụzọ zuru ezu osobo chọrọ nke American Standard maka ịsa ahụ nso nke eyewash
Bọọlụ bọọlụ dị elu na-anabata valvụ mpempe mpempe abụọ, nke dị mma karịa valvụ bọọlụ otu, nwere oghere buru ibu, nke nwere ike imezu ọkọlọtọ ndị America maka ịmịpụ anya nke eyewash. (Igbapu mmiri ≧ 75.7L / min, eyewash eruba ≧ 11.4L / min chọrọ, dị irè na ngwa ngwa iwepụ), dị irè na ngwa ngwa.
BH30-1010: Nlereanya di iche
BH30-1011: Agba odo ABS
BH30-1011L: Green ABS ịgba
BH30-1011: Yellow ABS ịgba + igbe na-agbawa agbawa + ụda na mkpu ọkụ
BH30-2011: Yellow ABS ịgba + ABS odo linkage tụgharịa mkpuchi
BH30-1012zp: Push na aka aka + na-akpaghị aka (nzukọ ahụ nwere valvụ na-adịghị mma)
BH30-1316: 316 ihe
BH30-1111: Polishing n'ime na n'èzí (nri ọkwa ọkpọkọ)
BH30-1010T: Anya mmiri na-alụbeghị di
BH30-1018: Gbanwere na njikọ njikọ njikọ iji jikọọ njikọ snap
BH30-2012: 304 igwe anaghị agba nchara linkage clamshell
Nke gara aga: Aha ncha